Azo ampiasaina amin'ny hazakazaka amoron-dalana ve ny bisikileta cyclocross? - Cyclocross
Tena > Cyclocross > Hazakazaka cyclocross - ny fomba fikirakirana
Hazakazaka cyclocross - ny fomba fikirakirana
Azo ampiasaina amin'ny hazakazaka amoron-dalana ve ny bisikileta cyclocross?
Na eo aza ny fahamatorana rehetra, azo ekena tsara ny mitaingina ny anaobisikileta cyclocrossmananabisikiletaary ara-drarinyAmpiasaokarazana kodiarana misy tery kokoalalanakodiarana. Tsara ihany koa ny mitaingina fotsiny nylalanamiaraka amin'ny midadasika kokoacyclocrosskodiarana sy kodiarana efa anananao.
Vao tsy ela akory izay izahay no nanao lahatsoratra iray mampitaha ny fahasamihafana misy eo amin'ny bisikileta amin'ny bisikileta sy bisikileta cyclocross. Nandritra ny fotoana nanoratanay ny script dia nahatsikaritra izahay fa miaraka amin'ny taranaka vaovao antsoina hoe fiaretana amin'ny bisikileta fiaretana, ny fahasamihafana misy eo amin'izy roa dia kely kokoa izao. Nanontany ny tenanay izahay, ary ny sasany aminareo dia nanontany tena ihany koa ao amin'ny faritra misy ny hevitra, raha afaka mitaingina bisikileta amin'ny bisikilety ianao na tsia.
Fa rehefa manandrana misambotra any amin'ny tany tsy mitovy ianao dia mihasarotra hatrany. Raha ny marina dia mahatonga antsika rehetra Matt Stephens io. Isao aho.
Vetivety foana isika dia eo amin'ny vato misakana voalohany, io dia ilay fiakarana kely maloto sy mizotra mandeha mitaingina ilay bisikileta miaraka amina rojo 42 sy cassette 28. Fa hafahafa ihany, mety hisy hieritreritra fa amin'ity bisikileta ity, izay haingana be kokoa, ny fitaovana ambany dia tena ambany kokoa. Ka tsy olana ny hantsana.
Avy eo koa ny fanamorana. Eny, araka ny nolazaiko, ireo kodiarana ireo dia tery ihany ho an'ny cyclocross amin'izao fotoana izao. Ny fetra ara-dalàna UCI dia 33, saingy misafidy kodiarana 35c malalaka aho amin'ny familiana ankapobeny, ary betsaka ny olona mitaingina lavitra kokoa.
Ary toy izany koa amin'ity bisikileta ity, na dia natao miaraka amin'ny antontam-panarahana virtoaly aza mba malama sy malefaka amin'ny arabe, eto, amin'ny ahitra goavambe misy kodiarana tery sy mafy, dia tena asa mafy izany. ♪ ♪ Eny, noho izany dia manana zorony malama fotsiny isika ary akaiky ny fidinana kely. Tsy misy mampatahotra, fa hizaha toetra ny fikirakiran'ity bisikileta ity.
Eny ary, makà lap. Ahoana no ataontsika amin'ny fikarohana? Tsara izany raha ny fahitako azy. Rariny raha hiteny aho. Ny fizarana dia tsy ny olana noeritreretiko fa tsy androany.
Heveriko fa tsy mila fotaka be intsony ny fijanonana haingana. Saingy tena tsara aho izao. Ary eo amin'ny geometry izahay ary izany no iray amin'ireo fanontaniana lehibe nananako.
Ary avy eo misy ny zava-misy fa tsy afaka nankany amin'ny toerana akaiky an'io rojo vy lehibe io aho satria gadra vy 52 sy 52, midika izany fa tena mandeha haingana ianao ary tsy dia nalaky haingana aho. Tsara, ny fahasamihafana lehibe indrindra eo anelanelan'ny sy bisikileta lakroa io raha ny hevitro dia ny sakan'ny kodiarana. Ireo kodiarana ireo dia tery loatra noho ny tsiriko. Ny zavatra midadasika kokoa dia hamoaka potika bebe kokoa ary koa hahafinaritra kokoa amin'ny fiara tsy mataho-dàlana.
Saingy misy zavatra iray izay mbola tsy nokasihintsika androany ary izany dia ny tanjaka. Moa ve ny bisikileta an-dalambe matanjaka ka azo entina eny ivelan'ny arabe, na tsoriko, fa hotapahinao io? Eny, izany no fanontaniana apetratsika amin'ny roa amin'ireo mpanamboatra hitanao eto. Voalohany, Reynolds izay manao ireto bisikileta tsara tarehy be eto ireto.
fiarovan-doha ao ambadiky ny bisikileta mariky ny fahantrana
Avy eo izahay dia nanontany an'i Canyon hoe iza no namela anay hampiasa ny bisikiletany tsara eny ivelan'ny lalana, ary nasongadin'izy ireo indray fa tsy natao ho an'ny cyclocross. Fa raha ny tanjaka dia matanjaka toy ny bisikileta lakroa izy io. Fa ahoana ny amin'ny fanontaniantsika tany am-boalohany, amin'ny farany? Afaka mitaingina bisikileta amin'ny hazakazaka ve ianao? Heveriko fa toa eny ny valiny, azonao atao izany.
Ahoana ary raha ianao no mijery ilay lahatsoratra niresahanay tamin'ny voalohany mba hampitahana ny fahasamihafana misy eo amin'ny bisikileta amin'ny bisikileta sy bisikileta cyclocross. Raha te-hahatongavana amin'izany ianao dia ny tsindrio etsy ihany no tokony hataonao. Na mba hahazoana teknolojia tsy an-dalambe, mianatra avy amin'ny tompony tsy miady hevitra Sven Nys.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manana ny sasany amin'ireo toro-hevitra amin'ny cyclocross tsara indrindra izy.
Hisy hazakazaka cyclocross amin'ity taona ity ve?
Tamin'ny fanambarana an-gazety fohy, nilaza ny mpikarakara tamin'ny volana Mey: Manenina izahay mampahafantatra anao fa ny andiany 2020 an'ny Fetin'ny Tena Rad an'nyCyclocross diatsy hatao. nyhazakazakaNampahafantatra anay ny toerana fa izy ireodiatsy hampiantrano hetsika ho an'ny 2020vanim-potoana. Ny RRFCXdiamiverena amin'ny hetsika ho an'ny2021.28. 2020.
2020, taona tsy nisy nokasaina. Fipoahan'ny pnemonia tsy fantatra miafina any Wuhan, Sina. Karazana coronavirus vaovao.
Nitombo avo telo heny ny isan'ny firenena voakasik'izany. Vao avy nanambara ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana fa areti-mifindra io. Ny areti-mandringana COVID 19 dia namely an'izao tontolo izao ary nahatratra ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika.
Tsy afa-maina ny bisikileta. Nijanona ny fiainana ara-dalàna satria nanjary laharam-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka. Ho ahy manokana dia tsy midika fifaninanana hazakazaka sy fitsangatsanganana izany, fiovana lehibe teo amin'ny hafainganana.
Ny zava-dehibe dia tsy nanan-javatra hitarainana aho. Tao an-trano aho ary nanana andraikitra ny hanao ny anjarako mba hampitsaharana ny fiparitahana sy hikarakarana ireo olona manodidina ahy. Na izany aza, afaka namoaka tanjona mahomby aho ka tonga tamin'ny fararano sy ny vanim-potoana CX nanakaiky endrika tena tsara.
Nandeha tany Belzika aho mba hiverina amin'ny laoniny ary manararaotra ny asa mafy nataoko nandritra ny fahavaratra. Tsapako haingana fa ny vanim-potoana dia ho lasa lavitra be amin'ny fitsapana COVID mahazatra, ny protokolola henjana ary tsy misy mpankafy ny hazakazaka, fa nanao izay tratry ny herinay izahay ary nanao ny hazakazaka ary nampiseho podium ihany koa ny tongotra tamin'ny Eoropeana. Amin'ity tendrony ity dia mbola nanana hazakazaka matanjaka vitsivitsy aho alohan'ny nahatongavako tamin'ny sakana lehibe tamin'ny vanim-potoana 2020 sy 2021 Superprestige Merksplas.
Tsy dia nanomboka tsara ny hazakazaka, tsy tao anaty fasika nandritra ny fotoana lava akory, nidona tamin'ny vongan-tany ary nalefa teo amin'ny laseliko. Ny kodiarako teo aloha dia nihady tao anaty fasika ary natsipy teny ambonin'ny soroko havia ho any amin'ny soroko havia aho. Haingana be no nitrangan'izany.
Tsy nanam-potoana naninjarana ny sandriko akory aho. Nihodinkodina tamin'ny vokatr'izany ny vatako ary tsapako avy hatrany fa nihena sy tapaka ny taolan-taolana. F ***! Nipetraka teo an-korontam-pasika aho ary nahare mpamily hafa nidina ary nihazakazaka nanodidina ahy.
Nangina avy eo, nivadika aho ary nanitsy, avy hatrany dia tsapako fa reraka tanteraka ny soroko havia. Nihanika ny sakana aho ary nihaona tamin'i Kurt avy any TRINITY, izay nitondra ny bisikiletako. Nolazaiko azy fa tapaka ny taolam-patako, avy eo nahatsapa ny soroko sy ny taolana maranitra ary ny tarehiny nitantara tamiko ny tantara.
Tranolay fitsaboana, tapaka ny akanjon-koditra, fampidirana fanafody fanaintainana, avy eo mankany amin'ny fiara mpamonjy voina ary mankany amin'ny hopitaly any Turnhout. Voasoratra anarana amin'ny alàlan'ny triage, x-ray, akanjo hopitaly, avy eo fitsapana COVID, miresaka amin'ny dokotera, avy eo mankany amin'ny fandidiana. Hadinoko ny toerana nisy ahy rehefa nifoha aho.
Nandehandeha aho ary tsy nijaly loatra. Tamin'io alina io dia natory tsara aho na dia nifoha isaky ny adiny roa aza aho mba hijerena ny haavon'ny fanaintainana ary mety ny fizahana amin'ny dokotera ary tsara ny hiverenako amin'ilay mpivadi-pinoana. Ny andro manaraka dia henjana.
Hentitra amin'ny zava-mahadomelina sy fandidiana, avy eo mahatsapa ny zava-misy marina. Tamin'ny andro hazakazaka dia nandeha haingana be ny zava-drehetra, hopitaly lozam-pifamoivoizana, teatra fandidiana, fatoriana. Ka ny fotoana voalohany tena nananako fotoana nandaminana ny zava-drehetra dia ny ampitso.
Nandeha an-tongotra aho mba hitazomana ny lohako hahitako ny fomba hiverenako amin'izay nilaiko azy. Andro faharoa izany aorian'ny nahavoa ahy. Ka omaly aho niverina tany amin'ny tranon'ny ekipa avy ao amin'ny hopitaly.
Tsy tena mahafinaritra, saingy somary nandeha haingana be izy io ary tsy nahatsapa ho nanana fotoana be dia be handaminana ny zava-drehetra aho, ka nandany an'ity maraina ity aho nieritreritra ny dingana rehetra ary namantatra hoe inona no ho ahy. zava-misy mandritra ny herinandro vitsivitsy. Tsy maintsy nanao drafitra aho izao mba hiverenana matanjaka. Ny zavatra voalohany nolazaiko tamin'ny tenako dia ny hatanjaka noho ny hatramin'izay ary ho vonona amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny faran'ny volana janoary.
Izany no tanjoko ary ny zavatra rehetra eo anelanelany dia ny hanao ny tsara indrindra amin'izany andro izany. Nandeha nody aho andro vitsivitsy taorian'ny fandidiana ahy nandany 10 andro tany Ekosy. Faly aho fa nifidy izany.
Nanome toerana kely ahy tamin'ny fihazakazahana izany ary namela ahy hipetraka ara-tsaina ary hamela ny taolan-taolana hampijaly ahy. Efa nanao fotoam-pivoriana sasantsasany aho fa tsy misy hadalana loatra mba hitazomana ahy hiasa sy hifindra fotsiny. Yo! Andro 10 izao aorian'ny fandidiana ahy.
Nametraka ny Zwift aho ka mandeha kely isan'andro aho. Nihatsara ny soroko tato anatin'ny andro vitsivitsy. Nanohana azy io aho amin'izao fotoana izao.
Mahatsiaro ho reraka kely isan'andro aho, izay tsara, ary avy eo ny soroka dia tsy mahazo aina firy. Mbola miezaka ny tsy mavesatra be loatra aho. Ny vatana dia mbola nahatsapa ho henjana ihany, fa ny ankamaroan'ny andro dia nahatsapa fanatsarana ny soroko aho.
Avy eo dia nanidina nody aho nahita ilay mpandidy belza nanamboatra ny soroko. Niresaka momba ny mety hiverenan'ny hazakazaka aloha loatra isika raha mbola manasitrana ny taolana, ka nanapa-kevitra ny tsy hahita ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra aho. Fa kosa, nankany Girona aho mba hanao bara fampiofanana lehibe ary hahatratra ny haavo azoko.
Ny fotoana teto Girona dia tsara! Eny, izao dia mitohy. Tena tsara i Girona, avo ny antony manosika ahy ary mieritreritra aho fa io angamba no iray amin'ireo fiofanana tsara indrindra sy mitaingina vitako. Nandalo haingana ny asa telo herinandro ary niverina tany Belzika niaraka tamin'ny fahatsapana tsara aho.
Nanao quarantine sy andrana fito andro tsy maintsy atao aho. Avy eo dia niseho tamin'ny hazakazaka voalohany tany Mol, vonona amin'ny hazakazaka hafa. Andro sarotra izao.
Mol dia tena lalan-tsambo mafy fasika, fa ny lohako kosa tsy tafavoaka tanteraka tamin'ny lalao. Hatrany am-piandohana miaraka amin'ireo mpamily izay nidona tamiko, ny ady ho an'ny toerana sy ny adin-tsaina amin'ny fihodinana voalohany. Nahatsapa ho tsy nisy fiononana aho.
Nianjera kely fotsiny aho ary tsy nanana spark tamin'ny hazakazaka hanosehana sy hanao risika. Ataoko fa satria tsy niofana intsony aho, saingy tsy nanampy ny fahatokisako ny bisikileta ity hazakazaka ity ary natahotra ny hianjera. Nifantoka indray aho, fa vonona amin'ny faran'ny herinandro roa miaraka amin'i Hamme sy Overijse.
Hamme dia salan'isa tsara indrindra. Nanana hazakazaka tsara aho, saingy mbola nahatsapa fa nanangana ny hafainganam-pandehan'ny hazakazaka aho ary ny zavatra kely rehetra dia tsy maintsy nifanaraka. Saingy tao an-tsaiko dia fantatro fa Overijse dia fotoana iray hanehoako ny tenako ny ampitso.
Overijse dia iray amin'ireo taranja sarotra indrindra. Metatra mitsangana be isaky ny vodilanitra sy fiakarana ara-teknika sarotra sy fidinana. Tena tsara ny nandehanako tamin'ny elite tamin'ny taon-dasa ka vonona ny hampiseho ny fahaizako indray aho.
Nivory ary vonona handeha amin'ny tsipika, ny jiro dia maintso amin'ny maitso, herinaratra amin'ny alàlan'ny pedal, ny haingam-pandeha ary ny BAM. Eo amin'ny asfalta aho miaraka amina bisikileta sy vatana amboniko. Nianjera teo aloha aho, niahiahy momba ny taolan-taolana, fa rehefa nihodina aho dia avy tamin'ny lohaliko ny fanaintainana fa tsy ny soroko.
Te hifoha aho ary ny lohaliko roa dia efa nivonto sy nanamafy. Raha niverina tao an-toby aho dia nieritreritra ny fomba mahatsikaiky an'io fanomanana an'izao tontolo izao io. Enina andro talohan'ny hazakazaka dia mipetraka amin'ny lohalika roa ratsy aho, very hoditra ary DNF hafa.
Nandany andro vitsivitsy taty aoriana aho mba hitadiavana fitsaboana hanohizana ny fampiofanana sy hampiato ny lohaliko ho an'izao tontolo izao, saingy tsy miaraka ireo zavatra ireo ary tsapako fa mety tsy hisy izao tontolo izao. Mila milaza ny marina aho tamin'ity herinandro ity dia iray amin'ireo fotoana sarotra indrindra nandalovako. Amin'ny vanim-potoana ara-dalàna dia tokony ho nanao hazakazaka 20 na 30 teo ho eo aho, nanana fisondrotana sy fidinana, saingy ho tonga tamin'ny Herinandron'izao tontolo izao tamin'ny hazakazaka sy valiny maro.
Saingy noho ny fihenan'ny hazakazaka U23 sy ny zava-nitranga lehibe tamin'ny vakiboky vaky, dia nahatsapa aho fa tsy tena nanaporofo ny tenako ary vao mainka nihasarotra ny tsy nanombohana Welten. Hatramin'ny nianjerako tany Merksplas dia efa tao an-tsaiko fa ho tonga 100 isan-jato amin'ny tontolo aho na inona na inona. Nifoha isan'andro aho ary nampiofana mafy araka izay tratrako niaraka tamin'ny tanjona hanao ny tsara indrindra tamin'io andro io.
Rehefa nirodana tao anatin'ny enina andro talohan'ny toerana nalehako izy dia nidona mafy kokoa noho ny mahazatra. Ity vanim-potoanan'ny cyclocross ity dia nampianatra ahy lesona maro, izay matetika mampanaintaina, nefa io koa dia nahatonga fahatokisana ny fahaizako sy ny heriko hiatrehana ny fihemorana. Tsy isalasalana fa ho maro amin'izy ireo, fa ho vonona tsara kokoa noho ny hatramin'izay aho hiatrika azy ireo.
Hotsindriako foana ny tsindry.
Mandra-pahoviana ny hazakazaka cyclocross mahazatra?
Hazakazaka cyclocrossmanomboka amin'ny 30 minitra ka hatramin'ny adiny iray, miankina amin'ny sokajy misy anao. Na dia mila miofana mafy aza ianao mba ho tia mifaninana, dia tsy mila miditra an-tsokosoko amin'ny habetsaky ny feon'ny soavaly ilaina amin'ny fifaninanana amin'ny bisikilety na bisikilety ianaofirazanana.
Hatraiza no mahatsara ny mpitaingina hazo fijaliana tsara indrindra eto an-tany? Ary ahoana ny fahasarotan'ny mitaingina làlan'ny pro cyclecross? Tonga tao amin'ny renivohitr'i Cross, Belzika aho nanao izany tamin'ny alàlan'ny fanampian'ny mpampianatra mpiampita monina ao amin'ny GCN, Jeremy Powers, mba hahitana mivantana, fa avelao aho aloha hanome anao toe-javatra manodidina ny fiaviako na ny tsy fisiako. (mozika mahery) (Record Scratch) Mp bisikileta amin'ny hazakazaka za-draharaha aho. Nandany ora an'arivony teny an-dalana tamin'ny toe-javatra rehetra aho, nitaingina hazakazaka amoron-dalana ary nahavita nandresy vitsivitsy aza.
Na izany aza, tsy mbola nitazona hazakazaka fiampitana mihitsy aho. Raha ny marina dia tsy mahalala na inona na inona momba an'i Cross aho. Olom-baovao aho ka rehefa nanasa ahy ny mpikarakara ny Cross Jedi, Jeremy Powers, hanandrana ny taranja Zonhoven any Belzika, Belzika no renivohitr'izao tontolo izao, nieritreritra aho hoe maninona raha andramana.
Hatraiza ny hamafiny? Toy ny mitaingina mivezivezy eny an-tsaha ary Belzika dia toy ny trano fonenana ary nilaza tamiko i Powers fa hisy french fries, waffles, sôkôla ary labiera eto.- Voalohany, ho an'ireo tsy manam-pahaizana, Zonhoven, Belzika dia iray amin'ireo lapana an'ny andiany cycllocross Superprestige. Io dia toy ny cyclocross Formula 1, izay ifaninan'ireo mpamily tsara indrindra eran-tany.
Matthew van der Pool, Sanne Cant, ary Zonhoven dia iray amin'ireo lalana mitaky fangatahana indrindra amin'ny fotoana iandremana. Mila mifampiraharaha amin'ny fefiloha goavam-be feno fasika sy rut ny mpamily ary sarotra ny lalana mivoaka sy mivoaka hoy ny Belzianina. Ary ny ampahany tsara indrindra dia ny tsy fahitan'i Oliver ny fahasarotany.
Izay dia karazana mangatsiatsiaka ihany, satria amin'ny maha olom-baovao azy dia antenaiko hanome anao ny fahasarotany, ary noho ny hamafiny, antenaina fa afaka mianatra zavatra ianao - Ka aiza no misy ity fampianarana ataontsika ity, dia Jeremy ? - Hitanao eo ve ny fanadiovana? - Eny - Eto indrindra - Tsara. Izay (bip) izany ve? Inona ilay (bip)? - Izay ilay lehilahy maty. The Cull of Zonhoven - Mitaingina izany ve ny olona? - Handeha mitaingina ity isika - Andriamanitra ô. (Mozika klasika) - Okay, Oly, noho izany dia ny famonoana an'i Zonhoven ary amin'ny ankapobeny ny zava-drehetra any ambanin'izay nidiranao, dia toy ny VIP izany, ireo lavaka rehetra, ireo zavatra ambany dia ambany amin'ity faritra ity, amin'ity sehatra lehibe ity.
Manidina eto ianao, mitifitra, izany no fidinana malaza, lehibe be
Eto daholo ny sary rehetra, mitomany eo anilanao ny olona rehetra. Ny fampianarana dia midina eto amin'ny fomba mitovy. Boom, ezaka be, mitolona i Hercules, any amin'ny faritra ambony.
Midina indray ianao ka miverina amin'ny ilany faharoa amin'ny lavaka fasika izay ahitanao ireo tsipika ireo ary avy eo dia mila mihazakazaka miakatra any ianao mba hanao zavatra hafa fa izany no fon'i Zonhoven - tsy mino fotsiny aho tena mitaingina azy ny olona. - Ho iray amin'ireo olona ireo ianao, vady. - Eny ary, manandrana aho, saingy mieritreritra aho fa ho faty. - Tsy ho faty ianao fa fasika, malefaka.
Tokony hihazona ny lanjanao ianao. Tsy maintsy mitazona ny lohanao ianao, mila mijery ny lamba maloto, ho salama ianao - jereo ny lamba? Tsy fantatro akory ny dikan'izany ry akama - tsy fantatro, tsy maninona ianao, andao handeha - jereo ny lalana? - lanja miverina. (Censor bip) (mozika jazz pop) (Censor bip) - Buddy, tsy azoko inoana hoe sarotra tokoa izany - Sarotra izany - tsapako fa toy ny Bambi amin'ny gilasy aho.
Ny mitaingina an'ity fasika lalina ity dia toy ny tsy nisy nitaingenako teo aloha ary tena sarotra ny mijanona ao amin'ireto sisin-tany ireto na izay antsoinao hoe- Eny- Ary ahoana no hijanonana ho mahitsy.
Hitako fa tena sarotra izany - ny olona rehetra dia tsy maintsy manomboka any amin'ny lehilahy iray ary omeko torohevitra vitsivitsy ianao ary hampidina ity zavatra ity ianao toa an'i Matthew van der pool boom, natahotra, nianjera. Hilamina izany, hampianariko toro-hevitra vitsivitsy ianao ary mieritreritra ny olon-kafa izay vao manomboka amin'ny zavatra toy izao fa mety hahasoa azy ihany koa - Mety, fotoana ho an'ny kilasy master - Ka izany no heveriko fa ambany ny faneren'ny kodiarana. Ianao angamba, inona araka ny eritreritrao no tafiditra tao, 50 pounds na toy izany? - 90 PSI eo ho eo - Eny, eny, be loatra izany, tsy maintsy resintsika izany - Fa maninona no tsy nolazainao tamiko izany? - Tsy maintsy niditra vao manomboka izahay satria vao manomboka ianao.
Mbola tsy nanao an'izany ianao - aleo aloha - 20, 20, 22, zavatra toa izany, andao hampidina azy ireo - marina. (Hiss of air) - Eny ary, ary ny zavatra faharoa tadiavinao raha miditra amin'ny zavatra toy izany ianao, satria izany no hidiranao, tsy maintsy mieritreritra izay lalantsara ho tafiditra ianao, marina? amin'ny fomba mora indrindra vitanao, toy ny fandosirana na aiza na aiza, satria tsy ho vitanao akory io fizarana voalohany io hahazoana ilay fidinana. Noho izany dia mila mandeha amin'ny akanjo avo be ianao.
Fitaovana avo kokoa hahazoana fihenan-tsasatra fa tsy cadence avo loatra, azonao ve ny tiako holazaina? - Eny - Raha manana cadence avo loatra ianao dia ho toy ny havia sy havanana, havia sy havanana, boaty afovoany antonony, hampandehanana azy ary avy eo tianao hialana aminao ny kodiarana araka izay tratranao. Atosiho eo alohanao, esory izy. Tsy maintsy manandratra ny lohanao ianao izao.
Betsaka ny mpamily no mahadiso azy ireo voalohany, mijery eto izy ireo amin'izay ezahany harahina zavatra toy izany. Toa ratsy izany, maninona? Satria eo alohan'ity sy ny toerana tsy tokony alehany ny lanjany, dia tadiavinao fa miverina lavitra toa ny mpitondra bisikileta an-tendrombohitra ianao. Tahaka ny anananao any aoriana any amin'ny bisikileta.
Manana izany lavitra eo alohanao ianao ary noho izany dia maivana be ny lamosinao sy ny kodiarana eo aloha. Ka ny kodiaranao aloha dia mandeha amin'ny làlana. Mahita irery ny lalan-kalehany izy io.
Raha vantany vao mametraka lanjan'ny kodiarana ianao, dia mihady izy ary indrisy fa izany no nahalalanao azy rehefa nitety ny bar ianao. - Mbola manana fasika amin'ny nifiko aho. Raha midina eto ianao ary ny furrows dia ao anaty fasika dia miteny amiko ianao mba hiezaka ny hijanona ao amin'ny r uts fa ahoana raha miala amin'ny rut aho na tsy mahatratra ny rut dia manandrana aho, tapitra ve ny lalao avy eo, ho raikitra ihany ve aho? - Mety tsy izany, raha manao ianao, dia fotsiny, dia ho tsara sy malefaka.
Toy ny fasika, mena volo ilay izy, toy ny mitsambikina eo am-pandriana ianao dia ho salama - ka manontany tena aho hoe inona no dikan'ilay freins? Manao ahoana ny teknolojia? ? Tokony hampiasa freins ve ianao rehefa midina any? - Tsy refy iray ihany no mifanaraka amin'ny rehetra, sa tsy izany? Tahaka ny safidin'ny tena manokana, fa hiteny aho hoe tsia satria ianao, eny, tsy te hamoy ny tanjaky ny fasika ianao matetika. Te handray ny tanjonao ianao. Midika izany fa tena mila mametraka ny tenanao amin'ny làlana marina ianao. - Ka raha hidina eto i Matthew van der Pool dia ho tapaka ve izy? - Heveriko fa tsy izy izany.
Heveriko fa tsy izy, tsia. Tsy misy freins ho an'ny pro, ny tiako holazaina dia ny fandefasana azy fotsiny. Heveriko fa raha ao anatin'ny toe-javatra misy oh-tsy misy izy ireo dia mety misy fantsom-panafoanana kely, saingy mila manamarina an'io fantsom-panafody io aho, saingy ny fahatsapako ankapobeny dia tsy frein.
Ny tsirairay r Okay, Oly, tadidio, karazana fitaovana afovoany. Tohizo ny familiana, ny fametrahana ny lanjainao ao ambadiky ny seza, atsangano ny lohanao, miandrandra, mijere ambony, mahavoa ny tongotrao. Avereno ao ambadiky ny bara ny lanjanao, miverina, miverina.
Avereno ny lanjanao, eny, avereno milanja Phew, eny, asa tsara, rangahy! - Andriamanitra.- Andao hojerentsika ny teknolojia entinao, o tsia.- Ahoana izany? - Tsia. - Avy amin'ny matihanina no ahitako azy? - Tsia. - Andriamanitra ô, mandeha haingana be koa aho .- Mandrosoa.- O ry sakaiza, be lalana ity. (mozika haingana) - Atoroko anao koa ny fomba fitondrana bisikileta. - Ie? - Ie.- Noheveriko ho tena izy.- Toy ny, eh, eny, toy ny namono zavatra tany an'ala ianao, toy ny serfa, ary toy ny nitondranao azy nivoaka avy tany an'ala, dia, eny , marina, eny, mbola tsara kokoa aza. (Nimonomonona i Oliver) - Eny, izany indrindra no fomba anaovan'izy ireo izany.
Van der Pool dia tokony handray naoty - Mety namorona karazana vaovao aho - Eny, hasehoko anao eto. Haingam-pandeha ianao. Raisinao eto izy, tànana ankavanana eto.
Raiso fotsiny izy. Eny ary, apetraho eo, eny andalovana izany. Ankehitriny atolory eto, atolory eto, avelao, avelao.
Mandehana midina any ary avy eo dia lasa. - Ambonin'izany? - Ie, izay ilay izy, andao handeha. Ankehitriny ianao dia mpitaingina hazo fijaliana matihanina tsara .- Ka? - Eny, marina.
Aza avela ho hitako indray ilay zavatra Hercules hafa - Okay - Eny, tsara izany, dimy ambony, dimy avo. Nahavita asa tsara ianao - misaotra rangahy - noravanao izany. Tsy maintsy atambatra izany rangahy.
Ity dia iray amin'ireo faritra efatra handresena ny Cull. Mila midina ianao, avy eo mila miakatra amin'ilay faritra mafy isika, avy eo midina ilay faritra mideza hafa indray, ary avy eo mila mihazakazaka eto isika, miarina ary miakatra amin'ny bisikiletantsika indray. - Okay, - Vonona ve ianao? - Eny - Avelao izahay.- Tsy haiko ny mamerina azy io indray.- Amin'ny, isika 'Hiasa amin'izany aho.- Okay. (mozika faly) Mampirehareha.- Ahoana ny hevitrao momba izany? - Maharesy lahatra izany. - Sarotra izany, sa tsy marina? - Eny, tena sarotra - Eny, toy ny fijerena azy, farafaharatsiny rehefa hitako tamin'ny fahitalavitra, satria mbola tsy teto mihitsy aho, fa raha tena midina aho izao, ary avy eo dia manana an'ity faritra ity aho , izay misy olona toa an'i van der Pool mahavita mitondra azy fa manapa-kevitra ny hiala ary hihazakazaka.
Ity no noresahiko tamin'ny swing, toy ny fahafahanao mampitombo ny hafainganana sy mitsambikina ary mihazakazaka dia matetika haingana kokoa amin'ny cyclocross. Ohatra, raha mila manao famolavolana cadence 10 goavana, telopolo eo afovoan'ny hazakazaka ianao, dia toy ny efa fantatrao fa sarotra izany - eny - ary fantatrao fa mafy izany, ary raha izany dia manipy eto fotsiny ianao fandinihana lanja amin'ny tongotrao mba hampiakatra izany fa tsy hitsambikina fotsiny ary hiakatra indray ho haingana kokoa, dia ho hitanao fa ny fizarana toa an'ity any amin'ny firenena cyclocross dia hendry kokoa - eny. - Tehirizo ny herinao, vonjeo ireo ezaka lehibe vitanao ireo amin'ny fotoana tena ilainao azy ireo. (Mozika Techno) - Noho izany dia hitanao ny fahasarotana amin'izany rehefa avy nanidina tamin'ny hazakazaka lehibe ianao, tsy maintsy mivoaka sy mihazakazaka, avy eo mila miezaka mafy ianao eto, mamely tsara an'io làlana io, izay mitondra anao mankany io fidinana mamakivaky adala io.- Eny, andriamanitra o.- Cardi ovascular, boriky toy izany izy.- Mahagaga, tsy mino ny fahasarotany aho.
Tahaka ny fanaovana ny session interval henjana indrindra, fa ny fahaizana ara-teknika ihany koa. Ho an'ny olona toa ahy dia tena sarotra be izany. Fa mahafinaritra! - Mahafinaritra, saingy heveriko fa sarotra ho an'ny rehetra izany.
Ny marina dia tsy mora izany na ho an'ireo matihanina aza. Finesse, teknika, làlana ilaina ilaina - mahafinaritra. (mozika upbeat) - Ka ity dia ny Sand Drop faharoa ao Zonhoven Cull, ary ity misy andohalambo kely.
Tsy azonao atao ny mamadika ny kodiarana eo aloha mba hampihena kely ny bisikileta. Rehefa manodinkodina ny kodiarana aloha ianao amin'ny lanjanao, tadidinao ve izay nolazaiko? Eo ambonin'ny paosin-tànana. - Ie. - Ka mila miondrika amin'ny bisikileta ianao ary mitazona ny hery, ka tena maniry ny ho eto ianao toa ny fandefesanao ny lanjanao hatrany eto, ary avy eo te-hivoaka ny bisikileta eo alohanao fotsiny ianao, ary Fantatro, fantatro izay eritreritrao rehefa mijery an'io ianao - Ie, heveriko fa tena sarotra izany.
Sahala amin'ny hoe sarotra izany. Miaraka amin'ity iray ity, dia izao aho dia mandalo an'ity sakany lehibe sy lalina ity izao. - Hanao zavatra tsara ianao.
Vonona ny hanandrana azy ve ianao? - Hezahako. (Mozika pop) (censor beep) (mozika epic) - Ity no tapany farany amin'ny cull. Tsy maintsy miala amin'ny bisikiletanao ianao izao ary mihazakazaka eo alohan'ny hamoizanao ny hery, sa tsy izany? Tahaka ity iray ity dia hafa kely izy io, tsara kokoa, nefa ny zavatra dia maranitra be.- Eny.- Mahatsiravina izaitsizy.- Izy io.- Te hitady ireo lavaka efa nataon'ny mpamily eo alohanao ianao , ary indroa izahay no nanao an'io ka misy lavaka vitsivitsy sahady ary te-hikikitra amin'ireo ny tongotrao ianao.
Tsy te handray làlana vaovao ianao. Te hampiasa ireo efa matotra ianao satria ho hitanao fa misy tohatra kely eo. Toy ny omby kely h eny.
Toy ny hoe manaraka ny omby hafa ireo omby. - Okay. - Manaraka omby hafa mihitsy ve ny omby? - Eny, raha milaza izany ianao, saingy heveriko fa izay nahita ny lahatsoratra GCN taloha ary nahita ahy nihazakazaka dia hahafantatra fa tena mahay mihazakazaka aho, noho izany ireto faritra ireto angamba no tena hataoko.- Eny, indrindra raha mitondra ny bisikileta ianao tamin'ny fomba nitondranao azy indroa farany.- Jereo sy ianaro ny tanjaka.- Mialà, manomboka mandeha amin'ny bisikileta izao.
Raiso io amin'ny farany ambany ambany ary mahita lavaka roa hafa. (Nihiaka i Oliver) - Taiza ireo omby? - Angamba eto izy ireo - (Matory) afobe. Manantena aho fa nahafinaritra anao ny nijery ahy nianjera nefa raha hitanao tsara dia azonao atao izany satria izahay dia handrakotra ny hazakazaka cyclocross superprestige amin'ny hazakazaka GCN ao amin'ny fantsona YouTube.
Ampahafantaro anay ny hevitrao momba an'i Oly sy ny fomba nataony androany. - Mety tsia.
Ary ny waffles sy ny labiera nampanantenaininao ahy? - Oh eny, eny eny eny, tsara, andao isika haka azy ireo. - Ie.
Ahoana ny fomba hidiranao amin'ny hazakazaka cyclocross?
Torohevitra ho an'nySAMBATRANanomboka:
Mahazobisikileta. Ok, tsy mila bisikileta CX manokana ianao hanandramana azy.
Fahaiza-manao fampiharana.Cyclocrossdia feno singa tsy fahita matetika amin'ny lalana antonony na bisikilety an-tendrombohitra.
Fanandramana amin'ny kodiarana sy ny fanerena.
Milalao amin'ny fotaka.
Nandeha bisikileta nandritra ny 30 taona teo ho eo aho, nefa, na dia izany aza, tsy mbola nitaingina cyclocross mihitsy aho, saingy hiova ny raharaha satria afaka enina herinandro dia hanao hazakazaka am-bisikilety voalohany amin'ny alàlan'ny fanampian'i Tom sy Simon aho. , samy mpitaingina Cyclocross tena tsara amin'ny androny mba hanampy ahy eny an-dalana. ♪ ♪ - Si, efa nanana ny toerana nitovizako ihany aho nandritra ny efa-polo taona lasa izay, inona no tena ilaiko? mitady bisikileta miampita? Inona no tsy itovizany? - Eny ary tena ilaina tokoa ny maka ny toeranao eny an-dalambe ary te hampiakatra azy iray na roa santimetatra dia tianao ny hamerina azy iray santimetatra ka izany rehetra izany dia eo amin'ny fipetrahanao. Izy io dia manome anao fifehezana kely kokoa, ary tena tsara kokoa kely fotsiny io rehefa miatrika ny faritra teknika ianao.
Ity no voalohany. Raha jerena ny haavon'ny laselyo dia tsy mahavita afa-tsy ianao raha toa ka somary tsy mitovy ny haavon'ny dian-tongotrao. Mazava ho azy fa mitaingina kiraro bisikilety an-tendrombohitra ianao ary pedal amin'ny lafiny roa, raha toa ka milona vitsivitsy ny haavony, dia ampifanarahinao izany, saingy tena mifantina tokoa izany.
Zavatra iray mahaliana ahy Matt, nanao ny hadisoan'ny rookie farany indrindra ve ianao? Ny tsindry kodiarana? - Eny, matetika aho mitondra eo amin'ny 105 eo amin'ny arabe ka nijanona 100 androany - Tena manana izany ve ianao? - Tsia, nahazo 60 tao aho, Buddy .- 60. Okay, cool.
Angamba mety te hidina kely ianao, manodidina ny 40 PSI, ho an'ny toe-javatra mitondra fiara mahazatra. Hafa mihitsy ny hazakazaka, saingy 40 PSI eo ho eo ny fitsangantsanganana. ♪ ♪ - Ka, Si, mijoro eto amin'ny valan-javaboary tsara tarehy izahay.
Ny tiako holazaina dia hoe, raha mbola tsy nitaingina hazo fijaliana ianao teo aloha, io ve no toerana tsara hanombohana? - Ie, heveriko fa tena manandanja tokoa ny toerana itondranao ny bisikiletanao mba hahazoanao tombony betsaka amin'izany. Ny zavatra tadidio voalohany dia tsy bisikileta an-tendrombohitra ka tsy te-hitondra zavatra goavambe ianao. Midika izany fa afaka mandeha any amin'ny bisikileta miampita ianao fa ny fanontaniana dia mahafinaritra ve? Raha be vato loatra izy io na miorim-paka loatra, dia avo ny risika amin'ny mangana ka tsy maintsy mametraka 80 PSI amin'ny kodiarana ianao mba hisorohana an'izany ary avy eo ny bisikileta dia mitaingina toa tsy misy dikany, tena mafy.
Ka hitady zavatra izay mety ho somary mankaleo amin'ny bisikilety an-tendrombohitra aho fa angamba mahafinaritra be amin'ny bisikileta hazo fijaliana. Ka araka ny nolazainao, eto izahay eo amin'ny valan-javaboary, feno ahitra, misokatra, tsy misy vato, tsy misy faka ary karazana mangatsiaka izany. Rehefa mivoaka any anaty ala ianao, izay tsara, dia te hahita lalan-kely tsy dia be vato sy faka ianao ary aza miala amin'ny paingotra kely sy ny toy izany. - Ary ahoana ny amin'ny fiara mandeha amin'ny bisikileta? - Marina tokoa.
Ny bisikileta miampita dia tsara eny an-dalana. Fantatrao fa somary miadana kokoa noho ny bisikileta amin'ny hazakazaka izy ireo, saingy mbola haingana ihany izy ireo. Ny karazan-tsoavaly ankafiziko indrindra rehefa tsy mihazakazaka aho dia zavatra mampifangaro na ny lalana na ny làlana.
Mamelombelona ireo fitsangatsanganana an-dalambe mankaleo satria afaka milentika ianao ary mandray zotra vaovao sy ny toy izany. Ny zavatra misy làlana sy làlana mizara 50/50 dia tena fombako ankafiziko indrindra ankehitriny. ♪ ♪ - Ka, Si, ny olako rehefa avy nitaingina ny làlana nandritra ny fotoana ela dia ny teknika nataoko manokana, heveriko fa afaka mandeha amin'ny asfalta malama aho.
Ary ny fieritreretana mikorisa tena izy ary avy eo mijanona mitsangana miaraka amin'izay dia tsy azoko lazaina intsony. misy. Heveriko fa ny zavatra voalohany tokony hataonao dia mampahafantatra ny hevitra hiala amin'ny pedal mba hanatsarana ny fifehezana ny faritra mikitoantoana sy ara-teknika.
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny fihazonana ny vongan-drano, ny freins hita eto ary ny fifehezana tsara kokoa, toy ny amin'ny bisikilety an-dàlana ihany. Avy eo tadiavinao ny haavon'ny pedal anao ary avy eo mipetaka amin'ny seza. Midika izany fa azonao atao ny mandray ny banga amin'ny tananao sy ny tongotrao, amin'ny fanokanananao ny vatanao ambony amin'ny tany amin'ny fomba mety indrindra.
Ary avy eo azonao atao koa ny manova ny lanjan'ny vatanao mandroso na mihemotra, miankina amin'ny familianao amin'ny tany lemaka na midina na inona izany. Ary avy eo azonao atao ny mandray azy io amin'ny fotoana rehetra rehefa tsy mila mandeha an-tongotra ianao ary mila miatrika ny faritra mikitoantoana sy ara-teknika. Io no fomba haingana indrindra handresena azy. ♪ ♪ - Ny ankamaroan'ny fotoana ao amin'ny Crossy dia mila ao anaty lasely ianao.
Izany dia ny mitazona hatrany ny pedal ary mahazo hery. Ny tanjona faratampony dia ny hitazomana ny lohanao sy ny sorokao ary hampihetsika ny zavatra hafa rehetra eo ambaninao - koa ahoana no fomba tsara indrindra hanaovana izany? - Eny ary, noho izany dia tadiavinao hiverina kely kokoa eo amin'ny lasely noho ny mahazatra ny lanjanao. Te hampidina kely ny cadenceo ianao raha ampitahaina amin'izay hataonao eny an-dalana ary manome anao zavatra hanosika ary koa manampy anao hanala tsindry ilay lasely, manampy ny bisikiletanao hiala eo ambanin'ny tampon-doha ianao mba hahafahanao mamaky sy aforeto ny kodiarana ary te-hihazona azy malalaka nefa hentitra, raha tsy mifanipaka izany.
Hitako rehefa mihazona mafy azy io aho, mampihena kely ny hovitrovitra amin'ny bisikileta ary manampy azy hanana fifehezana kely fotsiny. Ny zava-dehibe indrindra dia ny mitazona somary miondrika kely ny sandry. Ary mazava ho azy fa midika izany fa azonao atao ny mampihena ny hatairana, fa manalava azy ireo ihany koa mba hahafahan'ny bisikilety mitaingina kofehy kely sy ny sisa ary manampy amin'ny fitazomana ny fihazakazahana.
Ny fihomehezana mihorakoraka dia tsy mitovy amin'ny kilemaina, sakaiza. Mila manana fihenjanana kely amin'ny tananao sy ny tongotrao ianao mba hahafahanao mitandrina kely ny bisikileta. Amin'ny alàlan'ny fisolokiana fotsiny dia mahatonga ny bisikileta hanao izay tiany ary tsy voatery ho ilay mpitroka hatairana faran'izay tsara, saika - Marina, marina.
Ka io no toerana tsara indrindra ho an'ny 90% amin'ny mitaingina hazo fijaliana, ary indrindra raha sendra zavatra toy ny fotaka na fasika ianao dia ity no fomba tsara indrindra hitehirizana ny bisikileta. ♪ ♪ - Ary zavatra iray hafa, amin'ny Ilay zavatra tokana tsy dia tokony hieritreretanao loatra eny an-dàlana dia ny fitazomana ny fiakarana rehefa miakatra ianao, ary satria mipoaka be i Cross dia matetika ianao no mivoaka avy ao amin'ny lasely. Saingy rehefa lasa malama ilay izy, dia ho sahirana ianao hihazonana ny herinao.
Noho izany dia mila manitsy farafaharatsiny farafaharatsiny ny teknikao ianao amin'ny alàlan'ny fandehanana mihemotra kely ary avy eo ny tsara indrindra dia ho eo amin'ny lasely koa ianao ary amin'ny toe-javatra faran'izay mafy dia mety tsy maintsy mitsambikina ianao ao anaty lasely na manipy ny bisikiletanao mba hahazoana ilay farany kely fotsiny. Eny, ireo no fahaiza-manao fototra. Toa aleoko mandeha manao spaoro.
Ary matokia ary tongava hahita anay amin'ny herinandro ambony rehefa hasehoko anao ny fomba fihemorana sy fivoriambe mandritra ny hetsika. Tsy mampino. Afaka mahazo ny kafe ianao, Si? Raha mila lahatsoratra cyclocross GCN bebe kokoa, kitiho eto amiko.
Mipetraka ve ireo mpitaingina bisikileta?
Ny fahasamihafana lehibe iray dia ny safidin'ny pedal, indrindrampitaingina bisikiletytsy hampiasa ny pedal sy ny kiraron'izy ireo, fa kosa hindrana ireo pedal tsy misy clip sy kiraro avy amin'ny tontolon'ny bisikileta an-tendrombohitra. Ny bisikileta bisikileta an-tendrombohitra dia roa sosona ka mora kokoa ny manaoclip-in, ary tsy mora tratran'ny fotaka mora foana izy ireo.
Bisikileta Cyclocrossdiatsara amin'ny fivezivezenasatria mahatonga azy ireo ho azo antoka, haingana sy mahafinaritra ny mitaingina. Mahazo aina kokoa ny jeometriônany noho ny an'ny arabebisikiletaary manohitra tsy mihodina kokoa noho ny tendrombohitra no anoloranybisikileta.
Inona ny kilaometatra haingana indrindra amin'ny bisikileta?
Ny firaketana ankehitriny ho an'nyHaingana indrindra100an'arivonynyBisikileta(tsy misy fandrafetana) dia 3:11:11 (31.4 mph avg).
Inona no hazakazaka bisikileta lava indrindra?
Ny Tour de France no mafy indrindrahazakazakaamin'nybisikileta, fa na ilay fampisehoana frantsay malaza aza dia tsy maintsy mamela ny satrony amin'ny Trans-Siberian Extreme thehazakazaka bisikileta lava indrindraeto amin'izao tontolo izao.
Inona no maha samy hafa ny bisikilety sy bisikileta an-tendrombohitra?
Bisikileta Cyclocross, na lakroabisikileta, dia mety kokoa amin'ny lalan-kely tsy lavitra, toy ny mitaingina vatokely na hazakazakaao amin'nyahitra na lotoao anatin'nyhazakazaka hazo fijaliana. Mety tsy mikasa ny hiditra ianaotendrombohitra, fabisikileta an-tendrombohitramitantana lalana any amin'ny valan-javaboary sy faritra ivelany hafa tsara kokoa nohobisikileta cyclocross.
Inona no mampiavaka ny bisikileta cyclocross?
Bisikileta Cyclocrossdia ampiarahina amin'ny paingotra ambany, homanaomora kokoa ny mandeha ambonin'ireo faritra tsy mitovy. Làlanabisikiletamanana fitaovana avo kokoa, hanomezana ny hafainganam-pandeha ilaina amin'ny hazakazaka amoron-dalana. Ankoatr'izay, ny elanelam-bokatra tery dia miantoka fiovana haingana.Bisikileta Cyclocrossmampiasa kodiarana midadasika kokoa, ao anatin'ny 30-40 mm misy dian-tongotra.
Rahoviana no atao ny fiadiana ny tompon-daka amin'ny Cyclo nasionaly?
Niady ihany koa androany ny anaram-boninahitra zandriny, izay nahita fandresena ho an'i Millie Couzen sy Rory McGuire. Ny fiadiana ny tompondaka dia hatao amin'ny faran'ny herinandro 9 sy 10 Janoary, aorian'ny HSBC UK | daty dimy fetin'ny 2020 | Andiana amboara nasionaly Cyclo-cross Trophy.
Rahoviana ny andiana hazakazaka fiadiana ny CT?
Ny areti-mandringana COVID manerantany dia nanery ny fanafoanana ny firazanana CX any New England. Na dia misy ny hazakazaka cyclocross voafetra aza ny fanjakan'i Connecticut, ny CT Series an'ny CX dia tsy hitranga amin'ny taona 2020. Mandrapihaona amin'ny 2021!
Inona no tokony ho fantatrao momba ny cyclocross?
Tadiavo ny fampahalalana rehetra ilainao amin'ny maha commissaire anao na hahitana ny fomba ahafahanao miditra. Ny fotaka, ny hatsiaka mamirifiry ary ny hazakazaka mahery vaika no mahatonga ny cyclocross ho be fitakiana kit sy akanjo. Jereo hoe inona no ilainao hampandeha tsara ny andro firazanana. Ny fahafantarana ny hoe oviana ary rahoviana no hihinana dia singa iray lehibe hahombiazana amin'ny famaizana rehetra amin'ny fanatanjahantena tsingerina.